ကြိုးပြတ်လေတံခွန် | PoemsCorner
လေတံခွန်တစ်ခုဟာ ကောင်းကင်မှာ ပျံဝဲနေရုံနဲ့ သူ့ဘဝအဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံပြီလား အဲဒီလိုပျံနိုင်တဲ့အတွက် ငါမှငါဆိုပြီး သူ့ကိုယ်သူဂုဏ်ယူနေမှာလား သူဟာ တစ်စုံတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်မှုကနေ လွတ်ကင်းရဲ့လား သူ့မှာလွတ်လပ်မှုဆိုတာ ရှိရဲ့လား တကယ်လို့ ကျနော်သာ လေတံခွန်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျနော့်ကို ကြိုးဖြတ်ပေးလိုက်ပါ ကျနော့်ကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါ အမြင့်မှာ မနေရရင်နေပါစေ လွတ်လပ်မှုတွေနဲ့အတူ ဘယ်နေရာကိုကျကျ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်စွာနဲ့ ကျနော်ဆင်းသက်လိုက်ပါ့မယ် ပကတိအမှန်တရားတစ်ခုကို ရှာဖွေရင်းနဲ့ပေါ့်
In: ကဗျာ Posted By: kaunglay.zysm Date: Jun 17, 2013
Leave comment4Comments & 273 views
လေတံခွန်တစ်ခုဟာ ကောင်းကင်မှာ ပျံဝဲနေရုံနဲ့ သူ့ဘဝအဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံပြီလား အဲဒီလိုပျံနိုင်တဲ့အတွက် ငါမှငါဆိုပြီး သူ့ကိုယ်သူဂုဏ်ယူနေမှာလား သူဟာ တစ်စုံတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်မှုကနေ လွတ်ကင်းရဲ့လား သူ့မှာလွတ်လပ်မှုဆိုတာ ရှိရဲ့လား တကယ်လို့ ကျနော်သာ လေတံခွန်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျနော့်ကို ကြိုးဖြတ်ပေးလိုက်ပါ ကျနော့်ကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါ အမြင့်မှာ မနေရရင်နေပါစေ လွတ်လပ်မှုတွေနဲ့အတူ ဘယ်နေရာကိုကျကျ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်စွာနဲ့ ကျနော်ဆင်းသက်လိုက်ပါ့မယ် ပကတိအမှန်တရားတစ်ခုကို ရှာဖွေရင်းနဲ့ပေါ့်………………THANKS FOR WRITING THIS ONE ..
By: cynthia at Jun 18, 2013
THANK U FOR WRITING THIS….
tiat saing lawn pa tal.
By: maunggyi at Jun 18, 2013